Cup Cup China Abakhiqizi & Abahlinzeki Nefektri
Cup Cup - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 19 ye-Cup Cup)
I-BPA yamahhala we-BPA engahambi kahle
I-BPA yamahhala we-BPA engahambi kahle Le makhishi wekhofi wokuhamba eyenziwe kusuka ku-FDA evunyelwe futhi i-BPA mahhala-ebangeni lamakhemikhali okudla, ama-non-Pvc kanye nama-BPA-free, okungenayo i-toxic, akukho iphunga, ephephile futhi enempilo yomzimba womuntu. I izinkomishi ikhofi umgogodla ongekho, ongenalutho,...
Inkomishi yekhofi ejwayelekile ye-Eco-friendly & FDA
Inkomishi yekhofi ejwayelekile ye-Eco-friendly & FDA Izindebe zekhofi ezilahlwayo Ukudla ibanga lesicucu sekhadali, ukuvotela okungenalutho okuvaliwe kanye ne-esay yokuvula, Isembozo sekhasi yokudla kwekhabe. Umkhono we-PP oqinile ufanele ukuthatha, Ukuxazulula inkinga ye-silicone ye-fophsible cup foffee elula...
I-FDA I-IDA engekho ephuzile yokuphuza indebe yekhofi nge-Cover
I-FDA I-IDA engekho ephuzile yokuphuza indebe yekhofi nge-Cover Le FDA Silicone eFoldable Drinking Cup Cup Ne Cover kwenziwa nge-grade grade silicone, FDA BPA Free. Ukushisa okusebenzayo -40 ° C ~ 200 ° C I kabusha ikhofi izinkomishi i-valume ingu-500ml / 17oz, ubukhulu 165 * 88mm ngaphambi kokubumba, 78 * 88mm...
ikhebula elingashintshiwe elenzelwe ukuguqulelwa ikhebula elingabizi elishibilika
I-Collapsible Reusable Foldable Silicone Reusable Ikhofi yeCofi eshibhile · Ikomityi yekofi engasetshenziswanga` Umlomo wendebe Fanela umlomo, kulula ukuwuphuza. Ukusetshenziswa kwekhofi yekhasi okwenzeka kabusha Sebenzisa ukwelashwa okungaphezulu kwe-Smooth, Ukwelashwa okuhle okusanhlamvu · Ukwelashwa okusanhlamvu...
I-Collapsible Silicone Coffee Cup Foldable With Lids Best Product Ngo-2019 · Indebe yethu yokuhamba eyonakalisayo ye- silicone yenziwa kusuka kuma-silicone okudla-ebangeni , i- BPA Mahhala, i-FDA Kuvunyelwe , ayinabuthi futhi ayinaphunga. Kulula ukugeza, ukungadoti, ukuqina, ukuguquguquka nokuguquguquka.
I-Collapsible Silicone Coffee Cup eyenziwe ngezifiso Ukusebenza Okuphezulu kwe-Mug · Indebe yethu yokuhamba eyonakalisayo ye- silicone yenziwa kusuka kuma-silicone okudla-ebangeni , i- BPA Mahhala, i-FDA Kuvunyelwe , ayinabuthi futhi ayinaphunga. Kulula ukugeza, ukungadoti, ukuqina, ukuguquguquka nokuguquguquka.
Ukuphinda Kusetshenziselwe Ukuphinda Kusetshenziswe Ikhofi Khipha ku-internet Best Collapsible Cup Eshibhile · Indebe yethu yokuhamba eyonakalisayo ye- silicone yenziwa kusuka kuma-silicone okudla-ebangeni , i- BPA Mahhala, i-FDA Kuvunyelwe , ayina
Ukuqeqeshwa kwabantwana abathandekayo beSippy Cup Lids
Ukuqeqeshwa Kwabantwana Abathandekayo Sippy Cup Lids bakhuphile ukusebenzisa izinsana nabantwana izinyanga ezingu-9 phezulu. Lezi zikhumba ziphinde zimeze ubufakazi futhi ziphelele ekudluliseni abantwana kusukela amabhodlela kuya ezindebe. Isembozo sinomuthi wokuphuza njengendlebe epholile emlonyeni namazinyo, afanele...
Ukuqeqeshwa Kwabantwana Abathandekayo Sippy Cup Lid
Incazelo ye- Elephant Silicone Baby Sippy Lids Imininingwane Yemibala yeSilicone Sippy Lids Ukuze uthole olunye ulwazi:
Ukuthengiswa Okushisayo Okubuyiselwa Ngaphandle Kwamakhemikhali Ngaphandle Komugwa Wekhofi Cup
Ukuthengiswa Okushisayo Okubuyiselwa Ngaphandle Kwamakhemikhali Ngaphandle Komugwa Wekhofi Cup Abicah Umchamo weKhobe Cup yiyona imikhiqizo esemqoka enkampanini yethu. I- Abicile yethu yomgwamanda wekhofi Cup ikakhulukazi ekusebenzeni kwethu kwekhaya. Okuqukethwe kwe- Silicone Coffee Mug Cup yethu i-100% ye-BPA ibanga...
ISilicone Reusable Cup Cup
Ikhofi Collapsible Cup
Refaable Cup Cup Bpa Mahhala
I-Collapsible Reusable Cup Cup
I-Eco Friendly Reusable Cup Cup
Cup Cup I-Collapsible Cup ISilicone Reusable Cup Cup Ikhofi Collapsible Cup Refaable Cup Cup Bpa Mahhala Collapsible Silicone Cup I-Collapsible Reusable Cup Cup I-Eco Friendly Reusable Cup Cup